စာဖတ်ချိန်:6မိနစ်များ ဥရောပမှာအများစုကအံ့မခန်းတက္ကသိုလ်များရှာဖွေနေ? ထို့နောက်အပေါ်ကိုဖတ်ရှု! ကျနော်တို့တက္ကသိုလ်ရွေးချယ်ရာတွင်အရေးပါသောရွေးချယ်မှုသိ. ဒါပေါ့, တဦးတည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားသို့ရာတစျခုသို့တက်ရောက်ရန်ရွေးချယ်တဲ့အခါတက္ကသိုလ်ကမ်းလှမ်းသောသင်ကြားရေးနှင့်သင်ယူမှုအဆောက်အယူရမယ်. သို့သျောလညျး, တစ်ခါတစ်ရံတွင်…